LA OGAADAY: Maxay Yihiin Labada Sababood Ee Real Madrid U Suurtogaliiyay In Ay Barcelona Ka Dul Qaaday Saxiixa Messi-ga Japan Ee Takefusa Kubo? Xog La Helay Oo Lagu Ogaaday. - Gool24.Net
Kooxda Real Madrid ayaa shalay si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay la soo saxiixatay da’yarka reer Japan ee Takefusa Kubo kaas oo lagu naanayso Messi-ga Japan.
Takefusa Kubo waxa uu hore uga soo ciyaaray xarunta da’yarta Barcelona ee La Masia wuxuuna ka mid ahaa ciyaartoydii sababta u noqday in FIFA ay laba xili suuq ganaax ku soo rogtay Barcelona balse waxa uu hadda ku biiray kooxda ay xifiltamaan ee Real Madrid.
Barcelona waxay wali doonaysay in ay soo celiso da’yarka Takefusa Kubo laakiin waxaa la ogaaday labadii sababood ee Real Madrid ka caawiyay in ay Barca ka dul qaaday saxiixa Messi-ga Japan ee Takefusa Kubo.
Barcelona ayaa sanadkii 2014 kii lagu eedeeyay in ay sifo sharci daro ah oo khilaafsan siyaasada suuqa caalamiga ah ay kula soo wareegtay Takefusa Kubo wuxuuna da’yarkan ka mid ahaa ciyaartoy laga dareeriyay La Masia.
Takefusa Kubo waxa uu hadda noqday 18 sano jir wuxuuna u wareegi karaa koox Yurub ah iyada oo aan wax sharci ah lagu jabinayn waana sababta ay hadda Real Madrid ula soo saxiixatay isaga oo xili ciyaareedka cusub qayb ka noqon doona kooxda Casilla ee Real Madrid oo uu hogaamin doono Rual.
Haddaba maxay yihiin labada sababood ee Barcelona ka hor joogsaday in ayna kooxdeeda dib ugu soo celiso xidigii ay ganaax ku mutaysteen ee Takefusa Kubo?
Sida uu shaaciyay wargayska Sport, Barcelona waxay doonaysay in ay dib ula soo saxiixato Takefusa Kubo laakiin labadan arimood ayaa suurtogal ka dhigi waayay oo Madrid ka caawiyay in ay 18 sano jirkan kula soo saxiixatay.
1- Dadka ku xeeran da’yarka Takefusa Kubo waxay dalbadeen dhaqaale badan oo ay Barcelona kaga doonayeen in ay ka bixiyaan Takefusa Kubo taas oo maamulka Barcelona ay kaga joogsadeen in ay da’yarka reer Japan markale kula soo saxiixdaan.
2- Waxay dadka ku xeeran Takefusa Kubo doonayeen in uu kooxda kowaad ku lug yeesho laakiin Barcelona ayaa damaanad qaadi wayday.
Si kastaba ha ahaatee, Maaha markii ugu horreysay ee ay Los Blancos saxeex ku garaacdo Blaugrana xilli ciyaareedkan waxaana haatanba ciyaartoy Real Madrid ah noqday Luka Jovic oo mudo dheer bar-tilmaameed usoo ahaa madaxda suuqa ee Camp Nou.
The japanese wonderkid is almost signed for real
Taas macnaheedu waa in kooxda u soo baxayan da’yar mustaqbal leh